Fampahalalana vaovao misy ireo safidy hafa rehetra amin'ny programa Adobe | Famoronana an-tserasera
Adobe Creative Cloud dia vahaolana tsara ho an'ny karazana famoronana, saingy ity infografika ity dia afaka manome vahaolana sy fomba hafa ho an'ny tsirairay amin'ireo programa fanta-daza an'ity orinasa malaza ity.
Michael Sexton no ento avy amin'ny kaonty Twitter anao ity sary ity mba hampisehoana amintsika fa misy ny tena mpisolo toerana afaka manome antsika ny vahaolana rehetra ilaina amin'ny andavan'andro amin'ny maha-mpamorona endrika, mpanao sariitatra, mpanamboatra tranokala, publicista na koa mpitantana ny vondrom-piarahamonina.
Sexton, avy amin'ny kaonty Twitter-ny, dia nizara infographic izay azontsika atao mitadiava vahaolana tena izy amin'ny tsirairay amin'ireo programa avy amin'ny Adobe toy ny Photoshop, Illustratos, InDesign ary maro hafa. Mpana sary iray fanta-daza amin'ny tantara an-tsary nofinofy antsoina hoe Everblue ary mamporisika antsika hifindra amin'ny seho toy ny Affinity.
Noho ny fanapahan-kevitry ny Ny Adobe aza mampiakatra ny vidin'ny famandrihana anao, mahaliana tokoa ity andiana fifandimbiasana ity. Ohatra, ho an'ny Photoshop dia misy Affinity Photo (izay horesahina eto), Clip Studio, GIMP, Krita, Fire Alpaca, Medibang Paint ary Photopea.
Miaraka amin'ny vaovao vao haingana momba ny fikasan'ny Adobe hanao ny tsy azo ihodivirana aorian'ny fanodikodinana olona ampy ho famandrihana, ity misy sary kely iray mahasoa ho an'ireo mpanakanto nomerika (vita amin'ny Affinity Designer): pic.twitter.com/r3EmfnOuDJ
- Everblue [Nikatona ny vaomiera] (@Everblue_Comic) Enga anie 3, 2019
Toy izany koa miseho miaraka amin'ny Illustrator, InDesign, LightRoom, After effects ary ireo andiana programa efa fantatry ny rehetra rehetra. Sary izay manondro be dia be amin'ireo izay afaka tanteraka miaraka amin'ny loko maitso, raha ireo kosa miloko mavo dia amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola, na dia eo amin'ny raharaha Photo sy Affinity Publisher aza dia tsy manana lafo be izy ireo; eny, aza adino ny hitsin-dàlana fitendry amin'ireto programa roa ireto.
Iray daholo andiana safidy mahasoa ho an'ny mpamorona ary ireo mpanakanto nomerika ahafahanao manohy miasa nefa tsy mila mandalo quota avo lenta izay midika hoe miditra amin'ity andiana programa ity ao amin'ny Adobe Creative; fa tsy hesorinay avokoa ny fanajana sy ny lanja mendrika azy ireo, fa anio, ary bebe kokoa amin'ny taona 2019, ho an'ny olana maro, azontsika atao ny mamita ilay asa amin'ireo programa ireo. Izahay aza manana izao mankany amin'ny Adobe Color ho fitaovana Internet lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ity infographic ity dia mampiseho anao ny fomba hafa rehetra amin'ny programa Adobe Creative Cloud
Ao anatin'ity fanadihadiana ity dia ilaina ny manampy Adobe XD, izay azo soloina koa amin'ny Sketch
Ie marina! Mbola tsara ny lisitra :)
Adobe dia mitady mpikaroka hitsapana Photoshop CC amin'ny iPad